D-လက်ကိုင်နှင့်အတူခေါက်ခေါက်နှင်းရေမှုတ်များ - တရုတ် Richina
Basic Info Model No.: HZ245 Head Material: Plastic Specification: Medium Application: Garden Shovel, Snow Shovel, Farming Shovel, Other Handle Material: Steel Shape: Square Shovel Function: Multifunctional Folded: Folded Attachment: Other Customized: Customized Color: Other OEM Order: Acceptable Overall Length: 670mm Folded Length: 320mm Head Size: 240*285mm Additional Info Packaging: 12pcs/ctn Productivit...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: HZ245
လျှောက်လွှာ: ဥယျာဉ်ရေမှုတ်များ, နှင်းရေမှုတ်များ, စိုက်ပျိုးရေးရေမှုတ်များ, အခြား
OEM အမိန့်: လက်ခံ
ယေဘုယျအား Length: 670mm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 285mm 240
အဆိုပါ ပြိုကျခေါက် နှင်းရေမှုတ်များ သင့်ကားအောကျဆီးနှင်းအထဲကတူးဖို့ဂေါ်ပြားကိုသုံးနိုင်သည်ဥပမာများအတွက်ဒေါင်လိုက်အနေအထားအတွက်မျိုးစုံအသုံးပြုမှု်ခေါက်, ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်အနေအထား: လက်ကိုင်ကြောင်း,3ပြည်နယ်များအကြားချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားနှင်းရေမှုတ်များ ဓါးအစွန်းလွယ်ကူလမ်းထွက်ဆီးနှင်းရှင်းလင်းစေသည်နှင့်၎င်း၏ကြာရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုသေချာသည့်အရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ဒီ၏ Ergonomics လက်ကိုင်ချုပ်ကိုင်ဖို့ ပြိုကျစခန်း နှင်းရေမှုတ်များ , သင်အလုပ်လျော့နည်းတန်ခိုးနှင့်ပြုသည်ကိုရနိုငျသညျ။ D-ချုပ်ကိုင်ထားနှင့်အတူကကိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သင်ကချိတ်ပေါ်မှာဆွဲထားနိုင်ပါတယ်လွယ်ကူပါတယ်။ ဤသည် နှင်းရေမှုတ်များအအေးဒေသများသို့မဟုတ်ခြံများအတွက်စုံလင်သော, ဆီးနှင်း, ဆန်စပါး, အမျိုးအနွယ်ကိုအစာကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏လေးလံသောဝန်တင်ဆောင်အတွက်လုံလောက်သောခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားအရှည် 670mm, ခေါက်အရှည် 320mm
အတူ PP ဓါးလူမီနီယံအစွန်နှင့်အတူနံရိုး, အရွယ်အစား 245mm * 285mm အားဖြည့်
Please allow 0.3″-0.9″ in size error due to manual measurement and confirm the size info according to our PRODUCT DESCRIPTION instead of the photos.
စံပြပြိုကျခေါက်ရေမှုတ်များထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည် foldable စခန်းဂေါ်ပြားရညျအသှေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ Mini ကိုနှင်းရေမှုတ်များ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ယခင်: Ordinary Discount Steel Wire Brush With Long Handle - Portable Camping Snow Shovel for Car – Richina
နောက်တစ်ခု: ကလေးတွေကအဘို့အ Set ပလပ်စတစ်ဥယျာဉ် Tools များ
ကလေးများဥယျာဉ် Tool ကိုသတ်မှတ်ရန်နှင်းရေမှုတ်များ
Multifounctional foldable နှင်းရေမှုတ်များ
လှည့်ကွက် Lock ကိုတယ်လီစကုပ်နှင်းခေါင်မိုးထွန်ခြစ်
Hollow အလှဆင် Blade ကိုနှင့်အတူပလတ်စတစ်နှင်းရေမှုတ်များ
18 လက်မ Adjustments Ergonomics နှင်းရေမှုတ်များ Pusher
Ergonomics နှင်းရေမှုတ်များ Push